မြန်မာမွတ်စ်လင်မ် စည်းလုံးခြင်း၏အင်အား: May 2009
Posted by Ordinary person at 1:00 AM No comments:
This is the first month of summer, and "Jumada" literally means dry. This month has no special rules and no specific customs arepracticed during it.
The Battle "Moota" took place in 8 AH, awar against infidels in which the Holy Prophet (SAW) did not participate. The battle is named afterafamous city in Syria (Moota). Zaid Ibn Haritha (RA) was the first appointed General by the Holy Prophet (SAW)
In the same battle Khalid ibn Walid (4th general of the Battle of Moota) was proclaimed by the Holy Prophet (SAW) as being "one of the swords of Allah"
The Holy Prophet (SAW) married his first beloved wife Khadijah (RA) 15 years prior to Prophecy
- Zaid Ibn Haritha (RA), Ja'far Ibn Abi Talib (RA) and Abdullah Ibn Rawaahah met martyrdom in 8 AH
- Abdullah Ibn Uthman (RA) passed away
- Abdul Muttalib, the grandfather of the Holy Prophet (SAW) passed away 32 years prior to prophecy
Posted by Ordinary person at 7:28 AM No comments:
Posted by Ordinary person at 7:13 AM No comments:
စူရာ အလ်-အန်ဗီယာ (နဗီတမန်တော်များကဏ္ဍ)
စင်စစ်ထိုအရှင်မြတ်သည်ပင် ညဉ့်ကိုလည်းကောင်း၊ နေ့ကိုလည်းကောင်း၊ နေကိုလည်းကောင်း၊ လကိုလည်းကောင်း ဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့သော အရှင်ဖြစ်တော်မူ၏။ (ထိုဂြိုဟ်နက္ခတ်) အသီးသီးတို့သည် (မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာ) ဂြိုဟ်နက္ခတ်လမ်းအသီးသီးတွင် လှည့်ပတ်သွားလာလှူပ်ရှားလျက်ပင် ရှိကြကုန်သတည်း။ (ကုရ်အာန် ၂၁:၃၃)
၎င်းပြင်နေသည် (လည်းသက်သေလက္ခဏာတစ်ရပ်)ပင်။ ထိုနေသည် မိမိ (သွားလာရာ) လမ်းအတိုင်းသွား (လာ) လျက်ရှိနေလေ၏။ ဤသည်ကားအလွန်တရာ နိုင်နင်းလွှမ်းမိုးတော်မူသော အကြွင်းမဲ့သိရှိတော်မူသောအရှင်မြတ်၏ တိုင်းတာသတ်မှတ်ချက်ပင်ဖြစ်၏။ (ကုရ်အာန် ၃၆:၃၈)
စူရာ အလ်-အဇ်ဇရ်ရီယာ (လွင့်ပါးစေသောလေများကဏ္ဍ)
(ငါအရှင်မြတ်သည်) လမ်းကြောင်းများရှိသော မိုးကောင်းကင်ကိုသက်သေထူတော်မူ၏။ (ကုရ်အာန် ၅၁:၇)
အေးလ်မွလ်ယကီးန် ဆိုသည်မှာစာပေကျမ်းကန်များမှရရှိသော အသိပညာများမှတစ်ဆင့် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အားယုံကြည်ခြင်း။
အိုင်းနွလ်ယကီးန် ဆိုသည်မှာ မျက်မြင်ကြုံတွေ့မှူများမှတစ်ဆင့် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အားယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးယုံကြည်ချက်မှာ ဟာက်ကွလ်ယကီးန် ဟုခေါ်သည်။ ဟာက်ကွလ်ယကီးန် ဆိုသည်မှာ အမှန်ကိုအမှန်အတိုင်းသိမြင်ပြီး အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အားယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီပို့စ်အတွက်ဝိုင်းကူသော Dr. Than အားအထူးဘဲကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ထိုမှတစ်ပါး ငါအရှင်မြတ်သည် သံသတ္တုကို ချပေးတော်မူခဲ့၏။ ယင်းသံသတ္တု၌ ကြီးကျယ်ပြင်းထန်လှသော စွမ်းအင်ရှိပေသည်။ လူသားတို့အဖို့အကျိုးကျေးဇူးများလည်းရှိသည်။
ထိုမှတစ်ပါး မည်သူသည် မမြင်ဘဲလျက် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အားလည်းကောင်း၊ ထိုအရှင်မြတ်၏ရစူလ်တမန်တော်များလည်းကောင်း၊ ကူညီသည်ကို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် သိတော်မူအံ့သောငှါ (ချပေးတော်မူခြင်းလည်းဖြစ်သည်)။ မလွဲဧကန် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်မှာမူကား အလွန်တရာ နိုင်နင်းလွှမ်းမိုးတော်မူသောအရှင်မြတ်ဖြစ်တော်မူပေသတည်း။ ကုရ်အာန် (၅၇:၂၅)
Posted by Ordinary person at 2:42 AM No comments: